မယ်သံ: သမီးလေး ဟေမာ
Ma Tint March 7, 2013 at 10:02 PM
ဟေမာလေး ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ သန္တာတစ်ယောက် အလွမ်းတွေဖြေနိုင်ပြီပေါ့နော်.. ဟေမာလေး ၆လာကြာပြီး ပိုလှလာတယ်... သန္တာပြောတာ မှတ်လိုက်ပြီ.. အိမ်ကိုအလည်လာရင် 'ဟေမာလေးလှလိုက်တာ'လို့ မမေ့မလျော့ စပြီး ပြောရမယ် :P
JuneOne March 7, 2013 at 10:47 PM
ဟေမာ ထွားလာလိုက်တာ..။ အကျီအပြာလေးနဲ့ သူနဲ့ သိပ်လိုက်တယ်။ ချစ်စရာလေး
မြသွေးနီ March 8, 2013 at 6:31 PM
မေမေခမျာ သမီးအတွက်နဲ့ မမောနိုင်မပမ်းနိုင် မေတ္တာတွေဝေနေရ..
သြော်.. မိဘတိုင်း ဒီလိုပါဘဲနော်..
ကူးကူးလှိုင် March 11, 2013 at 4:32 PM
အစ်မရေ ဟေမာလေး ပုံကို မတွေ့တာကြာလို့ ကြည့်ချင်နေတာ တော်တော်ထွားလာတယ် ပြီးတော့ အရမ်းလဲ ချစ်ဖို့ကောင်းလာတယ်နော်...
Mar Mar Lwin March 20, 2013 at 7:11 AM
Anonymous March 9, 2017 at 7:03 AM
still suckingabottle? oh no you need some cock to suck, if I was you daddy you would have been sucking mine long ago
2 fingers up doesthat mean you want2inches in you? I will put it in you and let you feel me cum